आईतबारको दिनमा यस्ता क्रियाकलाप गर्नाले मनोकामना पुरा हुनुका साथै शुख,शान्ति,संबृद्धी प्राप्त हुने ! - Sabal Post
पुजा पाठ – जुन घरमा पुजा पाठसँग सम्बन्धीत साना कुरामा ध्यान राखिन्छ र नियमित रुपमा भगवानको सेवा गरिन्छ, त्यस्तो घरमा कुनै दुख पीडा नहुने विश्वास रहेको छ। पुजासँग जोडिएका शास्त्रीय निमयमको ध्यान राखेमा सकारात्मक उर्जा प्राप्त हुने तथा सुख समृद्धि आउने धार्मीक विश्वास छ।
गोबर -गाईको गोबरलाई निकै पवित्र मानिने गरिन्छ। महाभारतको अनुशासन पर्वका अनुसार गाईको गोबर महालक्ष्मीको निवास हुने गर्दछ। त्यसैले जुन ठाउँमा गाईको गोबरले पोत्ने गरिन्छ, त्यो ठाउँ पवित्र हुने गर्दछ। साथसाथै माता लक्ष्मीको कृपा पनि मिल्ने गर्दछ।
इजिप्टमा १४ जना आतङ्की मारिए !
देवदहमा दोस्रो देवदह युथ आइकन हुने
थाइ नागरिकले बनाईदिए विद्यालय भवन
सरस्वतीका १२ नाम उच्चारण गर्नुस्, मनोकामना पूरा…